Music MP3 Downloader 5.5.1.8 Full Version ~ လမင်းတရာ
IN MP3 Downloader, MP3 Resizer - ON 12:57 AM No comments
MP3 သီချင်းများကို Full And Free ရှာဖွေ Download လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Music MP3 Downloader 5.5.1.8 (Latest Version) ပါ။ Search Box မှာ ရှာဖွေလိုတဲ့ Artist, Title, Album, Edition စတာတွေကို ထည့်သွင်းပြီး လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ သီချင်းများရော၊ မြန်မာ သီချင်းများကိုပါ ရှာဖွေနိုင်ပြီး၊ လတ်တလော Hot ဖြစ်နေသည့် သီချင်းများကို သီးသန့်ဖေါ်ပြပေးပါတယ်။ POP, Rock, Blue, Classic စသည်ဖြင့်လည်း Categories အလိုက်ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။ နားဆင်လိုတဲ့ သီချင်းပေါ်မှာ Click နှိပ်ခါ လွယ်ကူစွာနားဆင်နိုင်သည့် အတွက် Downloader အဖြစ်သာမက၊ Online Streaming Player တစ်ခုအဖြစ်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Full Version ဖြစ်အောင်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို patch file ကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီး patch ကိုနှိပ်ရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ...
Download>>>solidfiles (or) uppit (or) zippyshare (or) dropbox
Music MP3 Downloader, Unlimited Listening Online, Billboard Hot 100, 14 Categories Of Hottest Songs And More! Music MP3 Downloader is easy to use application created to help you search and download over 100 million MP3 files. You can try the searched results to decide which one to download. Music MP3 download always brings you the hottest songs in the world; it recommends you the Billboard Hot 100 every week and lists the hottest songs of 14 categories, from electrical to religious, mainstream to indie, hip-hop to classical, etc. Besides, you can do advanced search by artist, title, album, and edition. You can even choose specific edition of live, piano, guitar or cover etc. to search.
Over 100 million MP3 from the largest network:
100% clean and safe download:
Always bring you the hottest songs:
Unlimitedly listen to music online:
Compatible with iPod and all the other portable devices: